Isbedelka Cimilada ayaa sare u qaaday heerkulka Badda Tasman ku dhowaad saddex darajo | Saadaasha Shabakadda
Mawjadaha kuleylku waxay noqon doonaan kuwo aad u kacsan oo soo noqnoqda meelo badan oo adduunka ah, laakiin meelaha ay joogaan, ugu yaraan dhowr bilood sanadkiiba, waxay sababi doonaan dhibaatooyin badan mustaqbalka. Xaqiiqduna waxay tahay iyadoo badda kulul, ay sii adkaaneyso in la helo kalluun la heli karo maaddaama ay dadkoodu yaraanayaan, waana wixii ka dhacay Badda Tasman.
Intii lagu guda jiray xagaagii koofureed, mawjad kuleyl ah oo aan ka badnayn ama ka yarayn 251 maalmood, ayaa kor u qaaday heerkulka biyaha ku dhowaad saddex darajo, gaar ahaan, 2,9 ° C. Kordhintaani waxay sababtay hoos u dhac ku yimaada wax soosaarka beeraha salmon, iyo sidoo kale kororka lowska iyo dhimashada abalone. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay horseeday inay yimaadaan dhowr nooc oo ajnabi ah, sida lagu sheegay daraasad uu hoggaaminayo saynisyahan Eric Oliver
Kulaylinta Badda Tasman xagaagii koonfurta ee la soo dhaafay ayaa ahayd tan ugu welwelka badan tan iyo markii ay jiraan diiwaanno: waxay saameyn ku yeelatay dhul badeed todoba jeer ka weyn cabirka jasiiradda, iyo qiyamka ilaa 2,9 darajo Celsius oo ka sarreeya inta caadiga ah, isbeddelka cimilada ayaa dhab ahaantii masuul ka ah.
Oliver ayaa yiri a ku dhawaaqid »waxaan hubin karnaa 99% in isbadalka cimilada anthropogenic uu ka dhigay mowjadadan kuleylka bada dhowr jeer ay u badan tahay, waxayna kordhisaa suurtagalnimada in dhacdooyinkan ba'an ay soo noqnoqdaan mustaqbalka.
Daraasadda, oo lagu daabacay joornaalka Nature Communications, oo diiradda lagu saaray aag ku yaal xeebta bari ee Tasmania. Mawjada kuleylka waxaa sababay daad biyo kulul oo ka yimid bariga Australia, kaasoo tobanaankii sano ee la soo dhaafay sii xoogeysanayay kuna sii fidayay dhanka koonfurta.
Sidaa darteed, haddii aan tallaabooyin loo qaadin si loo xakameeyo isbeddelka cimilada, biyuhu way sii wadayaan inay sii kululaadaan xitaa in ka badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Isbedelka Cimilada ayaa sare u qaaday heerkulka Badda Tasman ugu yaraan saddex darajo